Wondershare TunesGo Ochie (Mac) User Guide | Wondershare
Export Music ka iTunes Library
Export faịlụ site iOS Devices ka Mac
Nyefee faịlụ site Mac ka iOS Devices
Jikwaa Music, Videos na Photos on Devices
Olee otú mbupụ iPhone / iPod / iPad Music na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka iTunes Library
Detuo Music na listi ọkpụkpọ site na iDevices ka iTunes Library na a Single Click
Mgbe ị jikọọ iPod aka / nano / ịkpọgharịa / kpochapụwo, iPhone ma ọ bụ iPad gị Mac na ẹkedori TunesGo (Mac), Pịa "Iji iTunes" na ala nke window.
Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ a ọhụrụ window Pop elu, na-agwa gị na ndị niile na songs na listi ọkpụkpọ na-efu gị iTunes Library ga-agafere gị iTunes Library na Fim na play adabere. Pịa "Malite" na-amalite na-ebufe usoro.
Nke a bụ quickest ụzọ idetuo music na listi ọkpụkpọ site na gị iPhone, iPod aka / nano / ịkpọgharịa / kpochapụwo, na iPad gị iTunes Library on Mac. E wezụga, i nwekwara ike ịhọrọ idetuo music na listi ọkpụkpọ gị iTunes Library ke "Music" window. Iji mụtakwuo, na-agụ ndị na-esonụ Infomation.
Copy listi ọkpụkpọ site na iPhone, iPod nano / ịkpọgharịa / kpochapụwo / aka, na iPad ka iTunes Library
Ọ bụrụ na ị na-aga idetuo ụfọdụ listi ọkpụkpọ site na gị iPhone, iPod aka / nano / ịkpọgharịa / kpochapụwo, ma ọ bụ iPad ka iTunes Library, biko pịa "Music" na n'aka ekpe nke isi window. Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ listi ọkpụkpọ na depụtara si n'akụkụ aka nri nke popped elu window. Right pịa na playlist gị mkpa ma họrọ "Mbupụ na iTunes".
Cheta na: Ugbu a, ị nwere ike nyefee music na listi ọkpụkpọ site na iPod nano / kpochapụwo / ịkpọgharịa / aka ka iTunes / Mac-enweghị a ikedo.
Olee otú mbupụ Music, Photos, na vidiyo na iPhone / iPod / iPad ka Mac
Na n'elu ngalaba, anyị na-na ẹkenam otú mbupụ niile songs na ihe iOS ngwaọrụ iTunes Library. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, i nwere ike iji nyefee ụfọdụ họrọ songs si gị iPhone / iPod aka / nano / ịkpọgharịa / kpochapụwo / iPad ka iTunes ma ọ bụ gị Mac. Na nke a, ị kwesịrị ị na-eso Atụmatụ n'okpuru ime ya.
• Iji nyefee iPhone, iPod nano / ịkpọgharịa / kpochapụwo / aka ma ọ bụ iPad music ka Mac ma ọ bụ iTunes Library, pịa Music na-ekpe na kọlụm nke isi window ịbanye Music window. Ebe a niile ọdịyo faịlụ na-egosipụta site na udi. Iji nyefee music, pịa Music n'akụkụ aka nri nke window. Mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ ihe niile music faịlụ na-depụtara na ekpe ebi ndụ. Họrọ songs ị chọrọ na pịa "Export ka Mac" ma ọ bụ "Mbupụ na iTunes". Ọ bụ otu ihe nyefee Pọdkastị, iTunes U, audiobooks na olu memos kwa.
Cheta na: Na songs ndepụta, ị nwere ike ịhụ iTunes oyiyi. Ọ bụrụ na onye iTunes icon na-egosi na n'ihu a song, ọ pụtara TunesGo (Mac) ka chọpụtara na onye a song esesịn adị na ma ngwaọrụ gị na iTunes Library. Ọ bụrụ otú ahụ, ị na-adịghị mkpa nyefee ya na gị na iTunes Library.
• Iji nyefee iPod aka, iPhone, na iPad foto Mac, pịa Photo na ekpe kọlụm na ị ga-ahụ ihe niile na photos ugbu na ngwaọrụ gị. Na nri n'igbe, pịa Igwefoto Roll ma ọ bụ Photo Library ikpughe photos ẹdude ke abụọ ndị tụrụ. Pịa họrọ photos ị chọrọ mbupụ Mac, wee pịa "Export" na elu nke isi window.
Ọ bụrụ na ị chọrọ mbupụ a dum foto album gị Mac, nri-pịa album aha na nri n'igbe. Họrọ "Export" ke mmapụta ndepụta.
• Iji nyefee videos gị Mac, pịa Videos na ekpe kọlụm. Ekem, ke n'akụkụ aka nri nke Video window, ị ga-ahụ gị niile videos ota site na udi: Movies, pọdkastị, iTunes U, TV na-egosi, na Music Videos. Pịa video ụdị, mgbe ahụ ndị video na ị chọrọ nyefee Mac kọmputa na ekpe ebi ndụ. Pịa Export na n'elu nke window.
Otú nyefee music / videos / foto site na Mac na kọmputa na-iPhone / iPod aka / iPad
Ọ bụ nnọọ mfe nyefee music / videos / oyiyi si Mac na kọmputa na-iPhone / iPod aka / iPad. Pịa Music, Videos, ma ọ bụ foto na ekpe kọlụm. Wee pịa Tinye ke n'elu. Na window na-egosi, na-agagharị gị Mac maka faịlụ na ị chọrọ tinye gị na iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad. Mgbe achọta ha, ha, pịa Open ịgbakwunye ha gị iOS ngwaọrụ.
Atụmatụ: I nwekwara ike pịa Media-agagharị, wee pịa Audio, Image ma ọ bụ Movies ịchọta gị faịlụ. Họrọ songs, videos, ma ọ bụ oyiyi na ị chọrọ na ịdọrọ ha ka ha na-ekpe window. Ọ bụ ya. Na TunesGo (Mac), faịlụ na ngwaọrụ gị dịghị mgbe a ga overwritten mgbe ọhụrụ faịlụ na-kwukwara.
TunesGo (Mac) na-enyere gị iji tọghata kedi faịlụ ka iPhone, iPod aka na iPad enyi na enyi formats. Mgbe ị na-ịdọrọ kedi music ma ọ bụ vidiyo gaa na ngwaọrụ gị site TunesGo (Mac), a window ga-gbapụta, na-arịọ gị iji tọghata faịlụ. Ị kwesịrị ị na pịa tọghata na-amalite format akakabarede. Mgbe akakabarede okokụre, Pịa Tinye mbubata faịlụ ngwaọrụ gị.
Olee otú jikwaa music, vidio, na foto na iPhone / iPod aka / iPad
Wondershare TunesGo (Mac) bụ ọkachamara iPhone / iPod aka / iPad faili. Ọ na-enyere gị jikwaa ọdịyo faịlụ, vidio, na foto na iPhone, iPod aka na iPad mfe na rụọ ọrụ nke ọma.
• Jikwaa ọdịyo faịlụ. Pịa Music na ekpe kọlụm ịbanye ọdịyo faịlụ window. Site n'akụkụ aka nri nke window, ị ga-ahụ Ụdị maka ọdịyo faịlụ na listi ọkpụkpọ. Na ụdị ndepụta, họrọ ihe ọ bụla nke ụdị maka ọdịyo faịlụ. Na-ekpe ebi ndụ, ị pụrụ ịhụ niile faịlụ maka nke a ụdị. Họrọ otu na pịa Hichapụ. Na Playlist ebe, ị nwere ike ịmepụta ọhụrụ playlist site na ịpị "Tinye Playlist". Na mgbe ahụ ịdọrọ ọdịyo faịlụ site n'aka ekpe ebi ndụ ka playlist.
• Jikwaa foto na foto albums. Pịa Photos na ekpe kọlụm nke isi window na-ewetara ndị window ka photos. Mgbe ahụ si nri ebi ndụ, ị pụrụ ịhụ foto niile na-abụọ ebe: Igwefoto Roll na Photo Library. Họrọ nke ọ bụla foto, ị nwere ike pịa Nhichapụ bọtịnụ ihichapụ ya. Ka ịmepụta a foto ọhụrụ album, pịa "Tinye Albums". Mgbe ahụ aha album na ịdọrọ foto site n'aka ekpe ebi ndụ ka album.
• Jikwaa videos. Movies, TV na-egosi, iTunes U, wdg na-depụtara na n'aka ekpe. Ị nwere ike pịa kwekọrọ ekwekọ video ịbanye edezi window. Si ebe a, ị nwere ike itinye, ihichapụ ma ọ bupu videos.